ERROR KOODU 924 NA ỤLỌ AHỊA PLAY - GWUO AHIA - 2019
Ndozi koodu njehie 924 na Ụlọ Ahịa Play
Ụdị usoro egwuregwu STALKER nke ụwa a ma ama nwere ike ọ gaghị agba ọsọ maka ụfọdụ ndị ọrụ n'ihi na enweghi ebe nchekwa BugTrap.dll dị na usoro. N'okwu a, ozi yiri nke na-esonụ na-egosi na kọmputa: "BugTrap.dll na-efu na komputa ahụ. A pụghị ịmalite usoro ahụ". Nsogbu a dị nnọọ mfe edozie, ị nwere ike iji ọtụtụ ụzọ, nke a ga-atụle n'ụzọ zuru ezu na isiokwu ahụ.
Dezie Ihie BugTrap.dll
Njehie ahụ na-emekarị na nsụgharị nke ndị egwuregwu na-enweghị ikikere. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na ndị mmepe nke RePacks jiri aka ha mee ngbanwe na faịlụ DLL e dere, bụ nke antivirus na-ele ya anya dịka ihe egwu ma na-echekwa ya, ma ọ bụ ọbụna wepu ya na kọmputa ahụ. Ma, ọbụna na nsụgharị ikikere, nsogbu yiri nke ahụ nwere ike ime. Na nke a, ọrụ nke mmadụ kpatara: onye ọrụ enweghị ike iji aka ya wepụ ma ọ bụ mee ka faịlụ ahụ gbanwee, ihe omume ahụ agaghị enwe ike ịchọta ya na usoro. Ugbu a a ga-enye ụzọ iji dozie njehie bugtrap.dll
Ozi njehie dị ka nke a:
Usoro 1: Tinyegharịa egwuregwu ahụ
Ịmegharị egwuregwu ahụ bụ ụzọ kachasị mma isi dozie nsogbu ahụ. Mana ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ọ ga - enyere aka naanị ma ọ bụrụ na a zụrụ egwuregwu ahụ n'aka onye nkesa na-ahụ maka ọrụ, yana RePacks, ihe ịga nke ọma enweghi ike.
Nzọụkwụ 2: Tinye BugTrap.dll ka ọ pụọ na antivirus
Ọ bụrụ na n'oge nrụnye nke STALKER ị hụrụ ozi banyere egwu nke antivirus, mgbe ahụ, o yikarịrị ka ọ na-etinye BugTrap.dll na klasini. N'ihi nke a, mgbe ị wụnye egwuregwu ahụ, njehie gosipụtara. Iji weghachite faịlụ ahụ na ya, ịkwesịrị ịgbakwunye ya na ihe omume antivirus. Ma a na-atụ aro ka ị mee nke a nanị na obi zuru ezu na faịlụ ahụ adịghị njọ, ebe ọ nwere ike ibute nje virus. The saịtị nwere isiokwu na ntụziaka zuru ezu banyere otu esi etinye faịlụ na antivirus okpu.
Gụkwuo: Tinye faịlụ na ngwanrọ nje virus
Usoro 3: Gbanyụọ antivirus
Ọ nwere ike ime na antivirus adịghị etinye BugTrap.dll na kirininiini, ma wepụ ya kpamkpam site na diski ahụ. N'okwu a, ọ ga-adị mkpa ịmegharị nrụnye STALKER, mana naanị mgbe antivirus nwere nkwarụ. Nke a ga-ekwenye na faịlụ ahụ agaghị enwe nsogbu n'enweghị nsogbu ma egwuregwu ahụ ga-amalite, mana ọ bụrụ na faịlụ ahụ kpatara ọ bụla, mgbe ị gbanyechara antivirus ọ ga-ehichapụ ma ọ bụ mechie ya.
Gụkwuo: Gbanyụọ antivirus na Windows
Usoro 4: Download BugTrap.dll
Ụzọ kachasị mma iji dozie nsogbu BugTrap.dll bụ ibudata ma wụnye faịlụ a n'onwe gị. Usoro a dị nnọọ mfe: ịkwesịrị ibudata DLL ma wega ya na folda. "ọnụọgụ"dị na ndekọ egwuregwu.
Pịa ụzọ ụzọ STALKER na desktọọpụ na bọtịnụ òké aka nri ma họrọ akara na menu "Njirimara".
Na windo nke mepee, detuo ọdịnaya nke ubi Akpa Ọrụ.
Rịba ama: mgbe ị depụta ịhọrọ nhọta.
Hichaa ederede ederede n'ime ogwe ihe nkesa "Explorer" wee pịa Tinye.
Gaa nchekwa "ọnụọgụ".
Mepee window nke abụọ "Explorer" wee gaa na folda ahụ na faịlụ BugTrap.dll.
Drag ya site n'otu windo gaa na nke ọzọ (na nchekwa "ọnụọgụ"), dị ka e gosiri na nseta ihuenyo n'okpuru.
Rịba ama: na ụfọdụ, mgbe ị na-agagharị, usoro ahụ anaghị edeba ọbá akwụkwọ ahụ na-akpaghị aka, ya mere egwuregwu ahụ ka ga-ebute njehie. Mgbe ahụ ịkwesịrị ịrụ ọrụ a n'onwe gị. Na saịtị anyị, e nwere otu isiokwu nke akọwachara ihe niile.
Gụkwuo: Ịdenye ọbá akwụkwọ dị ike na Windows
Na nchịkọta a nke ọbá akwụkwọ BugTrap.dll nwere ike ịre zuru ezu. Ugbu a egwuregwu kwesịrị ịgba ọsọ n'enweghị nsogbu.